युट्युब | मणिका शर्मा
लघुकथा मणिका शर्मा September 17, 2020, 3:30 pm
आमा युट्युबबाट आदिवासी गीत बजाई दिनु ल,पुरा सुन्न मन परेको छ-
भर्खर बाहिर दोकानबाट ल्याएको परमात्मा तेलको प्याकेटबाटबाट तेल खन्याँउदै ६वर्षदेखि काम सघाउन बसेकी चन्दाले भनी।
छक्क पर्दै मैले भनें-अरे हिँजो आज तँलाई पुरा घरको याद आउँदैछ, किन नी??
आउँछ नी घरको याद- यति जवाब दिएर उ एकछिन चुप् भई।
पहिला पहिला त मैले फोन गर भन्दा मात्र फोन गरेको याद छ, अहिले आफै गर्न थालिस,मनमा के छ कुरा नलुकाई भन्नु ल, तँ घर गएर अब आँउदिन भन्ने सोच्दैछस भनें मलाई भनी हाल्नु।
उसले मसिनो स्वरमा 'हुन्छ' भनी।
तँ आइनस् भनें मेरो बिजोक हुन्छ, यसो कोही त खोज्न पर्छ। तर घर गएर पनि अर्को ठाउँ मा चैं नजानु काम गर्न, कति हुन्छ म नै दिन्छु, तलाई मलाई सजिलो।
यती भनीसकेर म देखाउन नसकिने गरी भावुक बनें। चन्दा गई भनें मेरो छोरो त अललिन्छ होला, कसरी भुल्छ होला यो सानो बालकले, कसरी विदा दिनु???
म एउटी आमा हुँ। उसकी आमाको छाती छोरीको तिर्खाले खरिएको होला, चन्दा लाई पनि घर जाने मन होला, म बुझ्दछु।
वर्षमा एकपल्ट उ घर जान्छे तर पोहोरदेखि यता जान सम्भव भएन, यो वर्ष त झन कोरोनाले सब ठप्प छ। यता हर घरमा यस्ता साना छोरीहरू छन्। कोही स्वतन्त्र घरका छोरी जस्तै राखिएका छन् त कसैको स्थिति बेग्लै।
पैसा कमाएर घर पठाउँछन् यीनिहरू। महिला सशक्तिकरणको अचम्मको नमुना।
मसँग धेरै कामगर्ने केटीहरू बसे, राख्ने मेरो बाध्यता। आफु नोकरी गर्ने भएपछि भ्याउन सारो, नानीहरूको स्याहार गर्न घरमा अभिभावक नहुँदा यीनिहरू आफन्तभन्दा नजीक र सहयोगी बन्छन्। चन्दाकी दिदी आएकी हो पहिला, उसको विवाह भएर गएपछि दिदीले नै चन्दालाई पठाई दिएकी।
सानी, काम सघाउन नसक्ने, देख्दै माया लागेर आएको थियो। धेरै वर्ष बिते। उसको योगदान र सहयोग मैले दिएको पैसाले पुर्ताल गर्न सक्तैन। हिँजो आज पैसा छ भनें सबैकुरा पाइन्छ भन्छन् धेरैले। तर माया, इमान्दारीता किन्ने बजार म भेट्तिनँ कतै।
अनि म युट्युबमा खोज्दैछु उसको मनपर्दो गीत।
किनकि आफ्नोपनको तिर्सना के हो अनुभव गर्नसक्छु।